PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-08-26 - Usefuna ukuba ngusomahlaya upetronella
Usefuna ukuba ngusomahlaya upetronella
Ilanga langeSonto - 2018-08-26 - Front Page - LUCKY CAIN
UNGOMUNYE wabalingisi abayintandokazi kulezi zinsuku ngendawo ayidlalayo emdlalweni owuchungechunge, ithe Queen. Abaningi baqale ukumqaphela esikhangisweni senkampani yomakhalekhukhwini, icell C.
Lowo nguthembsie Matu osematheni kulezi nsuku, kwazise usanda kuqokwa emunxeni ibest Actress emncintiswaneni idstv Mzansi Viewers’ Choice Awards, owethulwe ngokusemthethweni ngeledlule egoli.
Ngemuva kwalo mcimbi ngibe nenhlanhla yokuba nengxoxo ekhethekile nalo mlingisi obefunwa ngapha nangapha ngezinye izintatheli. Ngenhlanhla unginikile isikhathi, saxoxa. Ungilandise ngothando aluthola kubalandeli bakhe kulezi nsuku njengoba echaza abaningi ngendawo kapatronella ayilingisa kwi
“Angazi ngingaqala ngithini, ngiyabonga LAPHA uthembsie Matu unorami Chuene. ngothando abantu abalukhombisa kimina nasemsebenzini engiwenzayo,” kusho uthembsie.
Uthi ngesikhathi eqala ukungena kulo mdlalo ubengalindele ukuthi indawo yakhe izothakaselwa kangaka.
“Kuyajabulisa ukubona abantu beyijabulela le ndawo kanti ngingasho nje ukuthi lukhulu abasazolubona,” kusho yena, engeza ngokunxusa ukuba abantu bamvotele njengoba eqokiwe kulo mncintiswano.
Uthi uzizwa ehloniphekile ngokuqokwa nabantu aqokwe nabo kulo munxa kwazise uyabahlonipha futhi abanye babo ubukela kubona. Uthembsie uqokwe kulo munxa nabalingisi okubalwa kubo ulinda Sebezo, Rami Chuene, Moshidi Motshegwa nolesego Marakalla.
Uthi okumjabulisayo ngokuqokwa kwakhe wukuthi kulo nyaka ubungaza iminyaka engu-30 ekulo mkhakha wezokulingisa.
Phakathi kwemidlalo aseke wabonakala kuyona kubalwa imadam and Eve, Rockville, Rhythm City nothi Abomzala kanti useke waqokwa nasemncintiswaneni wesouth African Film and Television Awards emunxeni webest Supporting
UTHANDA UKUNGENA NAKOWAMAHLAYA
Uthembsie ushadile kanti ubusiswe ngezingane ezimbili, u-unathi (26) nomamosa (23). Uthi ngaphandle kokulingisa, angathanda ukungena emkhakheni wamahlaya.
“Nakuba sengiwumuntu ojwayele ukufunda bese ngiyalingisa, amahlaya ahlukile kodwa yinto engizimisele ukuyiqala ngibone ukuthi ingangisebenzela yini,” kusho uthembsie.
Uthi uma ehluleka emahlayeni uyoziqhubekela nokulingisa okuyinto aseyejwayele.
Izingane zakhe nazo uthi sezike zamtshela ukuthi zinalo uthando lokungena emkhakheni wokulingisa.
“Indodana yami, u-unathi, ifisa ukungena ekulingiseni kanti umamosa yena unothando lomculo. Ngiyabeseka emaphusheni abanawo. Ngifuna bazimele, bangangeni ngegama lami kodwa bazakhele awabo amagama kulo mkhakha,” kuqhuba yena.
MAYELANA NOKWETHULA I-OPW
Nakuba engafunanga ukuphumela obala ngokwethula uhlelo, i-our Perfect Wedding, okuke kwavela ukuthi angase abe ngumethuli wayo, ukucacisile ukuthi angakuthokozela ukwethula uhlelo lakumabonakude.
“Angikaze kodwa angiboni ukuthi kungaba yinto elukhuni ukuyenza njengoba ngiwumuntu oke wasebenza emidlalweni yeshashalazi lapho yonke into yenzeka ngaleso sikhathi,” kusho uthembsie.
Uveze ukuthi kunomkhankaso azowenza nenkampani icell C.
“Nizowubona ngokuhamba kwesikhathi, ngeke ngikwazi ukuphawula kakhulu ngawo,” kusho yena.
Ngenxa yokuthi bekukhona abebesalinde ukuxoxa naye siphoqeleke ukuba sisheshe siyigoqe ingxoxo yethu kodwa kungicacelile ukuthi ungumuntu okhululekile futhi okwaziyo ukunikeza abantu isikhathi sakhe.
UMLINGISI odumile othandwa ngabaningi emdlalweni owuchungechunge kamabonakude, ithe Queen, esakazwa kumzansi Magic 161, uveze izifiso zakhe engxoxweni ekhethekile abenayo NELANGA